खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डरको मूल्य थाहाँ पाउँदा सबै हैरान – Sandesh Press
December 13, 2020 264
काठमाडौं । हिमाली जिल्ला हुम्लामा एक सिलिन्डर ग्यासको मूल्य कति पर्छ ? सत्य थाहाँ पाउँदा तपाईं चकित पर्नुहुनेछ । वास्तवमा हुम्लामा सिलिन्डरको मुल्य १४ हजार रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ । मुगुको गमगढीबाट हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटसम्म पैदल ढुवानी गरेर ल्याउनुपर्ने भएपछि मूल्य आकाशिएको बताइएको छ ।
सिमकोट बजारका बासिन्दा नन्दकुमार सिंहले एक ग्यास सिलिन्डरको मूल्य १४ हजार तिरेको बताउनुभयो । विद्युत् नियमित नहुने, दाउरा बाल्दा महँगो पर्ने भएपछि ग्यासको जोहो गर्दा ग्यासको मूल्य चर्को तिर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ । पैसा बढी परे पनि सहज हुने भएको कारण हुम्लामा ग्यास चुलोप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ ।
हवाईजहाजमा ल्याउन नमिल्ने र खच्चडमा ढुवानी गरेर हुम्लामा ग्यास सिलिन्डर भित्रिने गरेको छ । ग्यास व्यापारी लोकेन्द्र शाहीले हुम्लामा ग्यास महँगो पर्नुको कारण पाँच दिन पैदल लगाएर ढुवानी गर्नु रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले अग्रिम अर्डर भएपछि मात्र मुगुबाट ग्यासका सिलिन्डर झिकाउने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
अर्कोपटक ग्यास भर्नुपर्दा नौ हजार रुपैयाँ लाने गरिन्छ । सिलिन्डर व्यापारीलाई फिर्ता दिने र अर्को भरी सिलिन्डर ग्राहकलाई दिने गरिन्छ । हुम्लामा ७० जना ग्यास चुलो प्रयोग गर्ने ग्राहक रहेको बताइन्छ । पहिलोपटक हुम्लामा ग्यास चुलो प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या पाँच जना थियो ।
Prevमलेसियामा कम्पनीमा कार्यरत याम नारायण चौधरीको मृ’त्यु
Nextदु:खद खबर मलेसियामा कम्पनीमा कार्यरत याम नारायण चौधरीको मृ’त्यु
सबै विद्यार्थी सरकारी स्कुल जान थाले पछि नेपाल का एक हजार निजी स्कुल बन्द हुँदै !
आजको राशिफल : वि.सं. २०७७ माघ ३० गते शुक्रवार